Best SD2200 Super Rig yoMvelisi kunye neFektri | SINOVO
I-SD2200 ngumatshini osebenza ngemfumba ophindwe ngesanti kubunzulu baphantsi ngobuchwepheshe bamanye amazwe. Ayikwazi nje ukubhola iimfumba ezikruqulayo, ukubetha kwesigubhu, ukuxinana okunamandla kwisiseko esithambileyo, kodwa ikwanayo yonke imisebenzi yokujikeleza kwe-rotary kunye ne-crane crane. Ikwagqitha umjikelo wokujikeleza wokujikeleza we-rotary, njenge-ultra-deep hole hole, udibaniso olugqibeleleyo kunye nesixhobo esipheleleyo sokugrumba ukwenza umsebenzi onzima.
I-hydraulic epheleleyo ye-rig drill SD2200
6 ~ 27 ngomzuzu
Max ukubhola ubukhulu
Amandla esihlwele esikhulu
Amandla amakhulu okutsala
Ukutsala umgca (nyanzela 1st umaleko) wentambo ephambili
Lind isantya max sokutsala into ngentambo eziphambili
Rope sangqa intambo sokuncedisa
Ukutsala umgca (nyanzela 1st umaleko) sokutsala into ngentambo abangabancedani
Umbhobho wangaphandle we-kelly bar
Ibha yeKelly (Umgangatho）
Ibha yeKelly (Ulwandiso）
HQY5000A Idatha yobuchwephesha be-Crane (Ukuphakamisa umthamo weetoni ezingama-70)
Ubungakanani bokuphakamisa okuphezulu 70 t
Ubude boom 12-54 m
Ixesha elide le-jib 9-18 m
Boom + jib max ubude 45 + 18 m
I-Boom yokutshintsha i-engile 30-80 °
Umlobothi 70/50/25/9 t
Main sokutsala into ngentambo phakamisa / ezantsi
* Isantya esiphezulu se-116/58 m / min
Isantya esisezantsi 80/40 m / min
Sokuncedisa sokutsala into ngentambo phakamisa / ezantsi
Boom phakamisa Intambo Dia 20 52 m / min
Boom isezantsi 52 m / min
Isantya esirholayo 2.7 r / min
Isantya sokuhamba 1.36 km / h
Ukwahlulahlula (kunye nesiseko esisezantsi, ikhabhi ngasemva) 40%
Injini yedizili ilinganise amandla okuphuma / rev I-185/2100 KW / r / min
Ubunzima be-crane iphela (ngaphandle kokubamba ibhakethi) 88 t（ngonyawo boom 70 ton hook hook）
Uxinzelelo olusisiseko 0.078 MPA
Ukulwa ubunzima 30 t
Qaphela: Isantya nge * singahluka ngomthwalo.
HQY5000A Idatha yobuGcisa (iTamper)
Ukuphazamisa ibanga I-5000 KN.m (iMax12000KN.m)
Ilinganisiwe ubunzima besando 25 t
Boom ubude (engile boom intsimbi) I-28 m
Boom yokusebenza engile 73-76 °
Umlobothi 80 / 50t
Main sokutsala into ngentambo
Intambo iDia 26
0-95m / imizuzu
Main sokutsala into ngentambo asezantsi
Boom phakamisa Intambo iDia 16 52 m / min
Amandla enjini / isityhi 199/1900 KW / r / min
Ukutsala intambo enye 20 t
Ukuphakama ukuphakamisa 28.8 m
Irediyasi yokusebenza 8.8-10.2m
Ubukhulu bezinto zokuhambisa crane eziphambili, Lx Wx H, 7800x3500x3462 mm
Ubunzima be-crane iphela 88 t
Counter ubunzima 30 t
Ubungakanani bezothutho olukhulu 48 t
Ngokubamba irotator dia I-1500MM（ukhetho）
Ingcaciso ephambili yesitayile sokujikeleza
Drilling ubukhulu 800-1500 mm
I-torque ejikelezayo I-1500/9/75/600 kNM I-Max1800 kNhm
Isantya esijikelezayo 1.6 / 2.46 / 4.0 ngomzuzu
Uxinzelelo olusezantsi lwesitampu Ubunzima be-Max 360KN + 210KN
Tsala amandla ekasi 2444 kN uMax 2690 kN
Uxinzelelo lokutsala uxinzelelo 750 mm
Ubunzima Itoni ezingama-31 + (ukukhasa ngokuzithandela) itoni ezi-7
Ingcaciso ephambili yesikhululo samandla
Imodeli yenjini (ISUZU) AA-6HK1XQP
Injini yamandla 183.9 / 2000 kw / rpm
Ukusetyenziswa kwepetroli 226.6 g / kw / h (ubuninzi)
ubunzima 7 t
Imodeli yolawulo Isilawuli kude esinentambo
I-SD2200 ngumatshini osebenza ngemfumba ophindwe ngesanti kubunzulu baphantsi ngobuchwepheshe bamanye amazwe. Ayikwazi nje ukubhola iimfumba ezikruqulayo, ukubetha kwesigubhu, ukuxinana okunamandla kwisiseko esithambileyo, kodwa ikwanayo yonke imisebenzi yokujikeleza kwe-rotary kunye ne-crane crane. Ikwagqitha umjikelo wokujikeleza wokujikeleza we-rotary, njenge-ultra-deep hole hole, udibaniso olugqibeleleyo kunye nesixhobo esipheleleyo sokugrumba ukwenza umsebenzi onzima. Ilungele ngokukodwa ukwakhiwa kwemfumba, ibhulorho, imfumba yolwandle kunye nemilambo yePort kunye nokuchaneka okuphezulu kwesiseko somgaqo ongaphantsi. Isixhobo esitsha sokugrumba esikhulu sinezibonelelo zokulunga okuphezulu kolwakhiwo, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye neenzuzo eziluhlaza, kwaye sinomsebenzi wobukrelekrele kunye nenjongo ezininzi. I-rig yokomba ephezulu inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zommandla ontsonkothileyo, onje ngeCobble kunye neBoulder stratum, hard rock stratum, karst cave stratum and thick quicksand stratum, kwaye inokusetyenziselwa ukwaphula iimfumba ezindala kunye nenkunkuma.
Umsebenzi wokujikeleza wokujikeleza
Umsebenzi owandayo kunye nokwandiswa kwemfumba eyandisiweyo.
Impembelelo yomsebenzi wesando.
Qhuba istili, ukhuseleko kwindonga kunye nomsebenzi wokubhola.
Umsebenzi wokuphakamisa i-crane ye-Caterpillar
Ukomeleza ikheji yomqhubi wenqwaba kunye nokuphakamisa umsebenzi wesixhobo sokugrumba
Lo matshini usebenza ngemisebenzi emininzi, ungasebenzisa zonke iintlobo zamabhakethi ojikelezayo kunye nezixhobo zokomba ukujikeleza, umsebenzi, kwangaxeshanye, zisebenzise izibonelelo zabo ngezixhobo ezahlukeneyo kwenye, injini ukubonelela ngamandla, ukugcina amandla , Uqoqosho oluhlaza.
Ukusetyenziswa kwepetroli okuphantsi kunye nokusebenza okuphezulu kokwakha, umbhobho wokugrumba unokuphakanyiswa ngokukhawuleza kwaye wehliswe.
Umatshini omnye unokusetyenziselwa ukubhola ngokujikeleza. Ingasetyenziselwa njenge-crane crane kunye nomatshini wokudibanisa onamandla.
I-crane crass crass esindayo ngozinzo olukhulu, ilungele ukubhola i-torque enkulu, kunye ne-ultra-deep hole hole.
Indibaniselwano egqibeleleyo yokuloba ngokupheleleyo istampu kwidiskhi enkulu yokufaka i-torque, ukuqondwa kokudityaniswa kwemisebenzi emininzi yoomatshini bokugrumba, ukubola ukuqhuba, ukumba okujikelezayo, isandi esinzima seempembelelo kwilitye elilukhuni, ukubamba amatye, ukuqhekeza iimfumba ezindala.
Indawo enkulu yokomba ineenzuzo zokudityaniswa okuphezulu, indawo encinci yokwakha, efanelekileyo yokuxinana kweeprojekthi zeziseko zophuhliso zikamasipala, ulwakhiwo lweqonga lomlambo waselwandle, kusindisa kakhulu iindleko zokwakha ezincedisayo.
Imodyuli yetekhnoloji ye-Al inokulayishwa ukuqonda ukuqonda kwezixhobo.
Egqithileyo I-CQUY55 ye-Hydraulic Crawler Crane